Waa kanaa qorshaha ay dowlada Sweden ku musaafurinayso qaxootiga - iftineducation.com
Waa kanaa qorshaha ay dowlada Sweden ku musaafurinayso qaxootiga
iftineducation.com – Dowlada Sweden oo balan-qaaday in ay wadanka ka saari doonaan 80,000 qof oo qaxootiga diidmada la siiyay ah ayaa maanta soo bandhigay qorshihii dadkaasi lagu celin lahaa. Dowlada ayaa hadda go’aan rasmi ah gaadhay taasoo lagu xaqiijinayo in qaxootiga sharciga loo diiday ay wadanka isaga baxaan sida ugu dhaqsiyaha badan.
Qorshaha dowlada ayaa ah ugu horeyn in marka qofka diidmada la siiyo in laga goosto lacagta kaalmada isla markaana laga ceyriyo xerada qaxootiga. Arintaas ayaa la sheegay in ay saameyn ku yeelan doonto dad ka badan 4000 qof oo hadda ku sugan xeryaha laanta socdaalka (Migrationsverket) isla markaana kaalmo dhaqaale hela.
Talaabada labaad ayaa ah in qofkaasi loo qabto 2 ilaa 4 isbuuc in uu wadanka si iskiis ah uga baxo, oo haddii uu ka bixi waayo wadanka markaasi qasab looga saari doono. Wasiirka Socdaalka Morgan Johansson ayaa sheegay in ay diyaarin doonaan goobo lagu hayo dadka la soo qabtay ee loo diyaarinayo musaafurinta.
Qorshaha dowlada oo ah mid xoogan ayaa waxa uu taageero ka haystaa xisbiyada mucaaradka.
Milatariga K/Woqooyi oo lagu amray in ay adeegsadaan Niyuukleer